နိုဗွီရင်တုံခဲ့ရသောလက်တစ်ချောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » နိုဗွီရင်တုံခဲ့ရသောလက်တစ်ချောင်း
Posted by Novy on May 22, 2012 in Short Story | 44 comments
စစ်ကိုင်းတောင်ကို… အရောက်သွားလို့ ..တရားရှာမလေ……
တရားဓမ်မ တေးသံတွေ ၊ သူတော်စဉ်တွေ ၊ ရဟန်းတွေ ၊ သီလှရှင် ဆရာလေးတွေ
အို.. ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့် အေးချမ်းသာယာနေတာပါဘဲ
တောင်ပေါ်က ကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ ရစ်ခွေစီးဆင်းနေတဲ့
မြစ်မင်းဧရာ ၊ သောင်တွေပေါ်က စိုက်ခင်း ညနေစီဆာ နေ၀င်ချိန်ဆို ပန်းချီကား တစ်ချပ်ကို ကြည့်နေရသလိုပါဘဲ
အလှူလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ မေမေရှိတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ကို ရောက်နေတဲ့ ကျမအတွက်တော့ အရမ်းကို
အေးချမ်းသာယာနေတာပေါ့ ညရောက်တော့ မေမေနေတဲ့ ခြေတံရှည် သစ်သားကျောင်းလေးမှာပဲ
ကျောင်းလေးရဲ့ဘေးမှာ အုတ်တံတိုင်း ရှိတယ် တံတိုင်းရဲ့ တစ်ဘက်မှာတော့
မြင်းလှည်းတို့ ကားတို့ လူတို့ သွားတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ့
ကျမလဲ အအေးကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ အိပ်ယာခေါင်းရင်း ညာဘက်နားလောက်မှာရှိတဲ့
အို. လေလေးတဖြူးဖြူးနဲ့ ကောင်းလိုက်တာ
အိပ်ခါနီးကျတော့ ခြင်ထောင်ကို ဖျာအောက်ကို သေသေချာချာဖိ တစ်ခါ အတွင်းထဲကနေ စောင်တွေနဲ့ ပတ်လည်လိုက်ဖိ
ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲ ကျမက မြွေခြင်ထောင်ထဲကို ၀င်လာမှာ အရမ်းကြောက်လို့ပေါ့
(ကျမရယ် မြွေရယ် စစ်ကိုင်းရယ် ) က အရင်ကဇာတ်လမ်းတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်လေ
လက်မှာပတ်ထားတဲ့ နာရီလေးကိုဖြုတ် ၊ ခေါင်းကလစ်ကိုဖြုတ် အိပ်ယာရဲ့ ညာဘက်ပြူတင်းပေါက်ရှိတဲ့ဘက်မှာ ထားလိုက်တယ်ပေါ့
ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ တစ်ခြားပစ်စည်းတွေကိုတော့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာထားပြီးအိပ်ချင်းအမှု့ကို လေပြေလေးခံစားရင်စတင်လိုက်တာ
ကောင်းလိုက်တဲ့ အိပ်ချင်း ဒီအိပ်ချင်းကိုဖျက်ဆီးတာကတော့ ခြင်ထောင်ကို ခေါင်းရင်းဘက်ကနေ တချွတ်ချွတ်နဲ့ တိုးတဲ့အသံ
ကျမခြင်ထောင်ထဲကို ပြူတင်းပေါက်ကနေ မြွေတိုးဝင်နေပြီးလို့
ကျမအိပ်နေရာကနေဖျက်ကနဲထ လက်ကလည်း ပြူတင်းပေါက်မှာရှိတဲ့ သစ်သားတိုင်းကလေးတွေဆီကို လှမ်းပြီးစမ်းလိုက်တယ်
ကျမသိလိုက်ပြီ ဒါမြွေမဟုတ်ဘူး လူရဲ့လက်
လူတောင်မှ ဒီလိုညအချိန်မတော်ကြီးဆိုတော့ လူကောင်းမဟုတ်ဘူး သူခိုး
ဒီတဒင်က အချိန်လေးမှာ ဦးနှောက်ကသူခိုးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ
ရင်ခုန်တာရော ရင်တုံတာရော အစုံခံစားပြီးကြောက်တာရော
ပေါင်းပြီး ကျမဆီကနေ သူခိုးဆိုတဲ့အော်လိုက်တဲ့ အသံက အပြင်ကို ထွက်မလာပဲနဲ့ လည်ချောင်းထဲမှာတင်ပျောက်သွားပါတယ်
သူခိုးကတော့ ဖုတ်ဆို ခုန်ချပြီးအုတ်တံတိုင်းကိုကျော်ပြီးထွက်ပြေးသွားလေရဲ့
ဒီအချိန်မှာ မေမေနိုးလာပြီး ဘာဖြစ်တာလဲလို့ လှမ်းမေးတော့မှာ ကျမသူခိုးလက်ကြီးကို ကိုင်မိတဲ့အကြောင်းငိုပြီးပြောတော့တာပေါ့
ပြီးတော့မှ သူခိုး သူခိုးလို့ ဆက်တိုက်အော်တာပေါ့
ဘာတွေပါသွားလည်းလို့မေးမှ ပစ်စည်းတွေပြန်စစ်လိုက်တော့ ကျမနာရီလေးပဲပါသွားတယ်
အော်..သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့ နေရာမှာတောင် သူခိုးကလာပြီးခိုးသေးပါလားလို့
ဒီနေ့အထိ မေ့မအောင် ကြောက်လန့်ရင်တုံခဲ့ရတဲ့ လက်တစ်ချောင်း အကြောင်းကို စဉ်းစားမိရင်…….
yi yi has written 66 post in this Website..
မှန်တယ်ထင်ရင် နောက်မဆုတ်ပါ CJ # 1272011
View all posts by Novy →
လက်တစ်ချောင်းဆိုပြီး သုံးထားလို့ 
လက်ညှိုးတစ်ချောင်းဆို လက်ညှိုးထောင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခံတဲ့ ဟိုလူကြီးလွယ်ဘူး
နာရီတစ်လုံးပဲ ပါတွားလို့ .ပြီးတော့..အချိန်မိလေး သိလိုက်လို့ ..
အဲဒီလက်နေရာမှာ မြွေဆိုရင်တော့ တွားဘီ.တွားဘီ..
ဆရာလေးတွေပြောချက်အရတော့ အိပ်နေတဲ့ လူရဲ့ လည်ပင်းက ဆွဲကြိုးကိုတောင်
သူတော်ကောင်းတွေနေရာမှာ ဆိုးလိုက်တဲ့ သူခိုး
အဲ့သည်လို လှည်းလမ်းမ တို့ သဲချောင်းတွေတို့မှာ ..
အဲ့သည့်ကောင်တွေ ခွေပြီး နေတတ်တယ်ဆိုပဲ…….
ခေါင်းလေးတောင် မပြူဘူး ..ဒါပေမယ့် သူတို့က သားကောင် အနားလာတာကို
သိနေတယ်တဲ့… sensor ပါတဲ့မြွေ ဆိုပါတော့ဗျာ …
ဘာကို sensor လုပ်သလဲဆိုတော့ အပူကိုပါတဲ့ ခညား …
အဲ့သည့်ဆင်ဆာလေး (အချိုင့်လေး)က နှာယောက်နဲ့ မျက်စိကြားမှာ ရှိတာပါတဲ့…
လူမှာ ဆိုရင်တော့ ပါးချိုင့်လေးပေါ့ ….(အဲ့ဒါကြောင့် ပါးချိုင့်နဲ့လူတွေ အဆိပ်ပြင်းတာနေမှာ)
အနှီ loreal pit လေးပါတဲ့ မြွေ ကို pit vipers လို့ ခေါ်ပါတယ်ခည….
စာကို အားပေးရင်း ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ ကြပ်သွားပါသည်…
ဒေါ်လေးနိုမှာလဲ မြွေကို ကြောက်ရတယ်တော်ရေ့
(အချိုင့်လေး) ဆိုလို့ ကိုးဂဏန်းလေးရဲ့မေးကွဲလေးကို
မွန်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလေ.. အပျိုရှိတဲ့အိမ်တွေမှာ…ကြမ်းပြင်မှာ.. အပျိုပေါက်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့..
အပျိုကကိုင်ကြည့်ပြီး.. လူပျိုကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးသင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်တယ်ကြားဖူးတာပဲ..
(ဒီခေတ် ကွန်ပျူတာသမားတွေတော့ ရွေးခံရမယ်မထင်..)
အတော်တော့ ကြီးသား ;-)
တိန်… ကြီးဆို…နှိုက်နေကျမို့ သန်မာကြီးထွားတာနေမှာ….။
လက်ကြောတင်းသလား မတင်းသလားကို ဤနည်းဖြင့် စမ်းသပ်၍ ရနိုင်သည်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်
ကွန်ပူတာ ဂလပ်ဖစ် သမားဆို ပိုနုမယ်ထင့်…
နောက်ခါ စမ်းကြည့်လို့နုထွတ်နေရင် ကွန်ပူတာ ဂလပ်ဖစ်တမားပဲလို့ မှတ်ပေရော့
အဲဒါကြောင့် ဂီဂီ ပြောတာဖြစ်မယ်
သူငယ်ငယ်က ကောင်မလေးအိမ်သွား အပေါက်ကနိုက်လိုက်တော့
ဟာ ရှင့် (လက်)ထိပ်က ဖုတောင် နေတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်တော့ဘူး လို့ အပြောခံခဲ့ရဘူးတယ်တဲ့
ကောင်မလေးက လက်ညိုးကို သွားစမ်းမိတာ ၊ ကင်မရာအနှိပ်များလွန်းလို့ လက်ညိုးထိပ်မှာ ဘု တောင် ထနေဆိုပဲ
ပို့စ် ခေါင်းစဉ် ဖတ်ရတာနဲ့တင် ၊ ဖတ်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ သိချင်စိတ်တွေ ဖြစ်သွားပါကြောင်း
အော်….မနိုရယ် ။ ဖြစ်မှဖြစ်ခဲ့ရလေတယ်
မောင်ပေ နဲ့ မြွေကြောက်ပုံခြင်း တူနေတယ်
လမ်းကြုံမှ အမေရိကန်ကြောင် တစ်ကောင် လက်ဆောင်ပေးမယ်။
အမေရိကန်ကြောင် နဲ့ မြန်မာကြောင် ဘာကွာလဲဟင်
အမေရိကန်က ကြောင်က .. ဘူးကြောင်ကြောင် … ၊ မြန်မာကြောင်က အဆီပိတ်သယောင်ယောင် … အဲ့လိုကွာတာ … (တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါချင့် .. ဟိဟိ ) စတာပါ .. ဟိဟိ … ။ နှုတ်ခမ်းမွှေးဆွဲပီး … လစ်ပြီ ဒက်ဂလောက် .. ဒက်ဂလောက် … ။
မနိုဗွီ ရင်တုန်သလို မွန်ကစ်လဲ ဖတ်ပီး ရင်တုန်သွားရပါတယ်..
လက်ကြီးကို စမ်းမိတော့ ပိုကြောက်တာပေါ့နော်…
သရဲထက် လူစင်စစ်ကို ပိုကြောက်လို့ပါ.. သူတို့က ရန်မူနိုင်တယ်လေ…
မနိုရဲ့ဘ၀မှာ သူခိုးလက်ကို တစ်ခါမှ မကိုင်ဘူလေတော့
အတော့ကို ရင်တုံ ကြောက်မိပါတယ်
မြွေလို့ထင်တာတောင် သွားစမ်းရဲသေးတယ် မနိုရယ်…
မြွေဆို ရန်ပြုနေမှ အခက်…
(ကျမရယ် မြွေရယ် စစ်ကိုင်းရယ် )
ဟီးဟီး.. ကြောက်တာကို အတည်ပြုဖို့ အတွက်
ကျနော့ အဒေါ်တဦးတုန်းကတော့ အိမ်ထဲဝင်တဲ့ သူခိုးကို..
ပက်ပင်းတွေ့တဲ့ အချိန်မှာ .ကတ်ကြေးနဲ့ ပစ်ပေါက်လိုက်တာ..
သကောင့်သား ကတ်ကြေးမှန်ပီး ပြေးပါလေရော.
သူလည်းနောက်နေ့ညတွေ မှာ.သူခိုးက ရန်ပြန်ရှာလာမှာ စိုးလို့
၂ ပတ်လောက် အထိ.လန့်နေခဲ့ရပါကြောင်း
မနိုရေ .. ရေးပြသွားတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိုက်တာ … ။တော်သေးတယ် အစ်မရေ .. လက်ပတ်နာရီပဲ ပါပေလို့ပဲ … ။ ရေးပြထားတာ .. တကယ့်ကို အေးချမ်းမှုကိုလည်း ခံစားမိပါတယ် …။ လေလာရာ တံခါးလေးဖွင့်အိပ်တယ်ဆိုတော့ … ။
အစ်မရေ .. ညီမလည်း ကျောင်းတတ်တုန်းက အဆောင်နေခဲ့ရလို့ … အဲ့လို ခိုးခံရဖူးတယ် …တံခါးဖွင့်အိပ်မိတာပဲ .. ပိုက်ဆံက … ထောင်ဂဏန်းလောက်ပဲ စားပွဲပေါ် ပစ်တင်ထားပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ကခေါင်းအုံးအောက် အမြဲထားအိပ်ခဲ့လို့ တော်သေးတယ် … နောက်ရက်ကျတော့ ..သူခိုးစောင့်ဖမ်းတယ် … တကယ်သူခိုးက လာခဲ့ပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် မမိခဲ့ပါဘူး … ။ သူခိုးလို့ အော်ရမယ့် အချိန် မနိုလိုပဲ လည်ပင်းထဲက အသံထွက်မလာလို့ပါ … ။ ဒါ့ပြင် လက်ကတော့ မြန်မြန်နဲ့ ကောက်ပေါက်လိုက်တာ .. ရေသန့် ဗူးဖြစ်နေတယ် .. အသံမထွက်ပဲ လှုပ်ရှားမှု မြင်တော့ သူခိုးက လစ်သွားတာပေါ့… နောက်တော့ ထပ်မခိုးတော့ဘူး … ။
တခါတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့အိမ်ကို သူခိုးဝင်တော့..
အိပ်နေရင်းက နိုးလာပြီး ကြောက်တာနဲ့ မလှုပ်ရဲပဲ ငြိမ်နေတယ်တဲ့။
သူခိုးက အထုပ်ကြီးထမ်းပြီး ထွက်သွားတော့မှ သူခိုးလို့ အော်တယ်ဆိုပဲ။
သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ ဆိုတာ နင့်ကို ပြောတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း အမြဲ စ နောက် ဖြစ်ကြတယ်။
မဒမ်ပေါ်က် က နိုးနေတော့ သံဇကပ်နားရပ်လိုက်တာ သူခိုးလန့်ပြီးထွက်ပြေးရော။
မနိုရေ ရင်တုန်ခဲ့ရသော လက်တစ်ချောင်းဆိုတော့
သူခိုးဖြစ်နေလို့ မြွေဆိုဒုက္ခပဲနော် …
မြွေသာအမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငါတို့ ဒီပိုစ်လေးဘယ်ဖတ်ခွင့်ကြုံတော့မလဲကွယ်……………………………..
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး မထိတ်သာ မလန့်သာဖြစ်သွားတယ်
သူခိုးဆိုးညွန်း မီးတင်ထွန်းရဲ့ ၀န်းကြသောအခါ..
အော် သူခိုးမို့လေမြွေသာ ဆို ….ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်။
ကျေးဇူးတင် လိုက်တာမနို ရယ် လက်တစ်ချောင်းလုံး ကိုင်မိတာတောင် မမှတ်မိဘူးလား မပြောလိုက်ချင်ဘူး…..:(
လူကြီးတွေသိမှာစိုးလို့ နာရီပဲယူသွားတာ ပြန်ပေးမှာပေါ့ ……:)
တော်သေး တာပေါ့နော့် လူကိုအန္တရာယ်ပေးမသွားလို့ ။
အဲဒီဂထဲဂ အသားချင်းထိမိဒဲ့ ခံဇားမှုလေးဂို တနေ့မှ မေ့မယနိုင်ဂဲဘာ နိုဗွီဂလေးယယ်..။
မှတ်ချက်။ နာရီခိုးသွားဂျင်း မဟုတ်ပဲ လက်ချင်းထိမိသည့်အချိန် အတိအကျသိရန် အချိန်အမှတ်အသား အနေဖြင့်ယူသွားဂျင်းဖြစ်သည်။ ဘဝအမှတ်တယ ထိုနာရီအား လူဇိုးသူခိုးလက်မှ ကင်းဝေးဇေရန် တရုတ်တန်းရှိ ပိုမိုလုံခြုံသော ကြေးမုံဂျီးအမိန့်ရ အပေါင်ဆိုင်သို့ အပ်နှံထားရှိဂဲ့ဘာဂျောင်း ခြစ်သောနိုဗွီဂလေး သိဈေအပ်ပါသီ။
နာရီခိုးသွားဂျင်း မဟုတ်ပဲ လက်ချင်းထိမိသည့်အချိန် အတိအကျသိရန် အချိန်အမှတ်အသား အနေဖြင့်ယူသွားဂျင်းဖြစ်သည်။
တညင်သားရူးတူးတူး နဲ့ အမေရိကန်ကြောင်ဘူးတူးတူး ရေ
ဟိုဘက်ကျောင်းမှာတည်းတဲ့ အမကြီးစီက ယူသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ အတွင်းပစ်စည်းတွေပြန်ပေးပါတဲ့ :-)
အော် အခုမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ် ခေါင်းစဉ်ကြည့်တော့ ရင်တုံခဲ့ရတဲ့ လက်တစ်ချောင်းဆိုတော့…
မနိုဗွီတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ ဆိုပြီး ဟိဟိဟိဟ…. အပျိုကြီးကိုများ ဘယ်သူ ဘာလုပ်လဲပေါ့..ဟဟဟ
အခုတော့ သခိုးလက်ကို ဆုပ်ကိုင်းပြီး သခိုးအော်တာ အသံမထွက်တဲ့အကြောင်းကိုးးးးးးး ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီ…
မနိုရေ rose ဖြင့် ယူတဲ့ လက်ကို အတင်းဆွဲပြီး ဒေါသနဲ့ ထုချလိုက်ချင်တယ်။ ယူချင်အုံး ဟဲ့ ငါ့နာရီလို့ ။
လက်တစ်ချောင်းဆိုလို့ပါ မနိုရယ်။ တနှစ် အခါတွင်း စစ်ကိုင်းမှာရိပ်သာဝင်ဖြစ်တော့ တောင်ပေါ်က သာသာယာယာ ရှိတဲ့ တည်လက်စ စေတီတဆူရဲ့ အတွင်းထဲမှာ ဘုရား ဦးခေါင်းတော်ကို ဖြတ်ပြီး ခိုးသွားတဲ့ သူတွေထဲက တယောက်ရဲ့ လက်ညှိုးတချောင်း ပြတ်ကျန်နေခဲ့တယ် ပြောပါတယ်။
ဘယ်လို ကြောင့်များ ဒီလို အမှုတွေ ကျူးလွန်နိုင်တယ် မသိပါဘူး မနိုရယ်။
တစ်ခါတုန်းကလည်း..ရဟန်းတစ်ပါး.နေတဲ့ တောထဲက ကျောင်း.အိုလေးထဲ.သူခိုး ၀င်ခိုးခဲ့တယ်.တဲ့။
သူခိုးက ကျောင်းအိုလေးထဲက..ရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေ.စု ပြီး.ယူပြေးသွားတာကို ရဟန်းက..တွေ့လိုက်ရတော့..
ပြေးထွက်သွားတဲ့သူခိုးကို ငေးကြည့်နေခဲ့တယ် ။
ပြီးတော့…ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီး စကားတစ်ခွန်း တိုးတိုးလေး..ဆိုတယ်။
အော်..ငါ့အတွက်…လမင်းကြီး ကျန်ရှိနေပါသေးလား…တဲ့ ။
ရင်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့ပုံဝတ္ထုလေးပါ ။ ကြုံ.လို့ .၀င်ရေးသွားတယ်နော် ။
အားပေးဖတ်ရှု့ သွားတဲ့ ရွာသူား အပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မနို အခုတော့ သူခိုးမကြောက်တော့ပါဘူး ( ထက်မကြုံသေးသမျှ) ;-)
အိပ်ယာနားမှတော့ ဘေ့စ်ဘော်ရိုက်တဲ့ဒုတ် ၊ 2ပေလောက်ရှိတဲ့ ၀ါးဆစ်ပိတ်တစ်ချောင်း
သူခိုးဝင်လာရင် ရိုက်ဖို့အတွက် ဆောင်ထားပါတယ်
သူခိုးက ကိုယ့်ကို အရင်ရိုက်သွားရင်တော့ မနိုကံပေါ့ ;-(
သူ့လက်ကြီး က မျက်နှာ ကို များ လာစမ်းလိုက်ရင် မျက်နှာသစ်လို့ ဆုံးတော့မယ် မထင်ဘူး။
မြွေ ဇာတ်လမ်း ကို စိတ်ဝင်စားလှတယ်ဗျို့။
ဂျူနိုလေးကလည်း မနိုလို သတ္တိခဲ ဖြစ်မယ့်ပုံပဲ။